အခွန်စာအုပ် - Business Centric Network (BCN)
June 19, 2018 June 18, 2018 San Thida
အခွန်မကျသင့်လစာငွေရှိရင်လည်း မိမိအလုပ်ရှင်ထံမှ လစာအခွန်ပေးဆောင်မှုအထောက်အထား စာအုပ်တောင်းကြပါ။ အလုပ်ရှင်မှ လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းနဲ့အတူ စာအုပ်ရရှိဖို့ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးမှာ တင်ပြတောင်းခံပေးရပါမယ်။ အခွန်မပေးရပေမယ့် တရားဝင်ငွေရရှိခြင်းအထောက်အထားမို့ အဲသည်စာအုပ်ကလေးမှာဖော်ပြထားတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ ကား အိမ် ခြံမြေ အစုရှယ်ယာ စသည်ဝယ်ယူတဲ့အခါ လုံလောက်မှုရှိရင် အခွန်ထပ်မပေးရပါ။
လစာ တစ်လ ၄သိန်း တစ်နှစ် ၄၈သိန်း အခွန်မကျသင့်
ကုမ္ပဏီမှာ ၄နှစ်ကြာ ၄၈ x ၄နှစ် = ၁၉၂သိန်း
ဝင်ငွေ ၁၉၂သိန်း – အခွန် ၀ကျပ် = စုဆောင်းငွေ (ငွေဖြူ) ၁၉၂သိန်း
မိမိဝယ်မည့် ကား/အိမ်ခန်း = ၁၅၀သိန်း
စုဆောင်းငွေမှ ပိုလျှံငွေ = ၄၃သိန်း
ပေးဆောင်ရန်အခွန် = မကျသင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လစာဝင်ငွေရသူများ ဖော်ပြထားတဲ့အထောက်အထားများနဲ့အတူ လစာထုတ်ပေးသူ အလုပ်ရှင်အား အခွန်ရုံးသို့ လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပို့ပေးပြီး လစာခွန်ထမ်းဆောင်မှုမှတ်တမ်းစာအုပ် ရယူပေးဖို့ တောင်းဆိုကြပါ။ အခွန်သက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်လစာ ရထားသူများလည်း လစာအမှန်အတိုင်း အခွန်ရုံးသို့တင်ပြ အခွန်ပေးဆောင်မှုမှတ်တမ်း ရယူပေးဖို့ အလုပ်ရှင်ထံကို တောင်းဆိုပေးကြပါ။
နိုင်ငံခြားမှာလစာရငွေအပေါ် အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ငွေဖြူကိစ္စ ပါ။
မိမိတို့ နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ လစာရခဲ့စဉ်က ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံခြားငွေ ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရှိသော ကာလဖြစ်ရင် ၂၀၁၂ ရှေ့ပိုင်းဖြစ်ရင် တရားဝင်ငွေလဲနှုန်းက ၆ကျပ်ခွဲ သာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနှုန်းကို ပြင်တွက်ပေး၍မရပါ။ ထိုကာလမှာ တရားဝင် MFTB. MICB စတဲ့ နိုင်ငံခြားငွေဘဏ်တွေမှာ စာရင်းဖွင့်အပ်နှံပြီး FEC ကောင်တာကနေ ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးတဲ့ FEC ထုတ်ယူထားတဲ့အထောက်အထား MEMO ရှိရသ် အဲသည် MEMO ပါနှုန်းအတိုင်း တွက်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းကာလကိုတော့ CENTRAL BANK ကနေ တရားဝင်ငွေလဲနှုန်း ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ အတွက် ပြင်ဆင်ထားပေးသော နှုန်းနဲ့တွက်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ မတိုင်မီ ရငွေကို ထိုစဉ်ကာလရဲ့ တရားဝင်နှုန်း ၆ကျပ်ခွဲ သို့မဟုတ် FEC MEMO ပါနှုန်း နဲ့သာတွက်ချက်ရပါကြောင်း အသိပေး လိုက်ရပါတယ်။
လစာဝင်ငွေရသူများ စာအုပ်ကလေးတွေ ရယူထား။
ကားအိမ်ခြံမြေ ဝယ်မယ်လား စာအုပ်ပြနိုင်သား။
အခှနျမကသြငျ့လစာငှရှေိရငျလညျး မိမိအလုပျရှငျထံမှ လစာအခှနျပေးဆောငျမှုအထောကျအထား စာအုပျတောငျးကွပါ။ အလုပျရှငျမှ လစာနှဈခြုပျစာရငျးနဲ့အတူ စာအုပျရရှိဖို့ ဆိုငျရာအခှနျရုံးမှာ တငျပွတောငျးခံပေးရပါမယျ။ အခှနျမပေးရပမေယျ့ တရားဝငျငှရေရှိခွငျးအထောကျအထားမို့ အဲသညျစာအုပျကလေးမှာဖျောပွထားတဲ့ ဝငျငှနေဲ့ ကား အိမျ ခွံမွေ အစုရှယျယာ စသညျဝယျယူတဲ့အခါ လုံလောကျမှုရှိရငျ အခှနျထပျမပေးရပါ။
လစာ တဈလ ၄သိနျး တဈနှဈ ၄၈သိနျး အခှနျမကသြငျ့
ကုမ်ပဏီမှာ ၄နှဈကွာ ၄၈ x ၄နှဈ = ၁၉၂သိနျး
ဝငျငှေ ၁၉၂သိနျး – အခှနျ ဝကပျြ = စုဆောငျးငှေ (ငှဖွေူ) ၁၉၂သိနျး
မိမိဝယျမညျ့ ကား/အိမျခနျး = ၁၅၀သိနျး
စုဆောငျးငှမှေ ပိုလြှံငှေ = ၄၃သိနျး
ပေးဆောငျရနျအခှနျ = မကသြငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လစာဝငျငှရေသူမြား ဖျောပွထားတဲ့အထောကျအထားမြားနဲ့အတူ လစာထုတျပေးသူ အလုပျရှငျအား အခှနျရုံးသို့ လစာနှဈခြုပျစာရငျးပို့ပေးပွီး လစာခှနျထမျးဆောငျမှုမှတျတမျးစာအုပျ ရယူပေးဖို့ တောငျးဆိုကွပါ။ အခှနျသကျသာမှာဖွဈပါတယျ။
အမှနျလစာ ရထားသူမြားလညျး လစာအမှနျအတိုငျး အခှနျရုံးသို့တငျပွ အခှနျပေးဆောငျမှုမှတျတမျး ရယူပေးဖို့ အလုပျရှငျထံကို တောငျးဆိုပေးကွပါ။
နိုငျငံခွားမှာလစာရငှအေပျေါ အခှနျဆောငျထားတဲ့ငှဖွေူကိစ်စ ပါ။
မိမိတို့ နိုငျငံခွားငှနေဲ့ လစာရခဲ့စဉျက ပွညျတှငျးမှာနိုငျငံခွားငှေ ကိုငျဆောငျခှငျ့မရှိသော ကာလဖွဈရငျ ၂၀၁၂ ရှပေို့ငျးဖွဈရငျ တရားဝငျငှလေဲနှုနျးက ၆ကပျြခှဲ သာဖွဈပါတယျ။ ထိုနှုနျးကို ပွငျတှကျပေး၍မရပါ။ ထိုကာလမှာ တရားဝငျ MFTB. MICB စတဲ့ နိုငျငံခွားငှဘေဏျတှမှော စာရငျးဖှငျ့အပျနှံပွီး FEC ကောငျတာကနေ ကိုငျဆောငျခှငျ့ပေးတဲ့ FEC ထုတျယူထားတဲ့အထောကျအထား MEMO ရှိရသျ အဲသညျ MEMO ပါနှုနျးအတိုငျး တှကျပါတယျ။ ၂၀၁၂ နောကျပိုငျးကာလကိုတော့ CENTRAL BANK ကနေ တရားဝငျငှလေဲနှုနျး ပွငျဆငျလိုကျတဲ့ အတှကျ ပွငျဆငျထားပေးသော နှုနျးနဲ့တှကျပါတယျ။ ၂၀၁၂ မတိုငျမီ ရငှကေို ထိုစဉျကာလရဲ့ တရားဝငျနှုနျး ၆ကပျြခှဲ သို့မဟုတျ FEC MEMO ပါနှုနျး နဲ့သာတှကျခကျြရပါကွောငျး အသိပေး လိုကျရပါတယျ။
လစာဝငျငှရေသူမြား စာအုပျကလေးတှေ ရယူထား။
ကားအိမျခွံမွေ ဝယျမယျလား စာအုပျပွနိုငျသား။
Previous postEssential HRM for Everyone
Next postရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် သင်တန်းများ ရနျကုနျစီးပှားရေးတက်ကသိုလျမှ ဖှငျ့လှဈသငျကွားမညျ့ သငျတနျးမြား